Norway: Maxkamada sare oo UDI-da u xukuntay kiis kala dhaxeeyay hooyo soomaali ah. - NorSom News
Norway: Maxkamada sare oo UDI-da u xukuntay kiis kala dhaxeeyay hooyo soomaali ah.
Foto: Skjermdump/NRK-TV Sawirka: Yaasmiin iyo ninkeeda Rolf Erik Kristensen.
Maxkamada sare ee dalkan Norway ayaa hey´adda qoxootiga dalkan Norway ee UDI-da u xukuntay kiis kala dhaxeeyay hooyo soomaali ah oo lagu heystay inay ka been sheegtay aqoonsigeeda shaqsiyeed, markii ay Norway magangalyada ka codsaneysay.
Yaasmiin Kristensen oo ah hooyada afar caruur ah iyo ninkeeda Rolf Erik Kristensen oo warbaahinta u waramay ayaa sheegay sida ay uga xunyihiin go´aanka ay maxkamada sare qaadatay, waxeyna sheegeen inay dacwad racfaan ah usii gudbin doonaan maxkamada sare ee xuquuqul insaanka Norway.
Kiiska Yaasmiin iyo hey´adda qoxootiga ayaa hada socday mudo lix sano ku dhow, wuxuuna soo bilowday markii Yaasmiin lagu eedeeyay inay sheegatay inay ka timid dalka Soomaaliya, iyada oo asal ahaan kasoo jeedo dalka Jabuuti.
Hey´adda UDI-da ayaa Yaasmiin ka celisay jinsiyada Norway, waxeyna ku amreen inay wadanka isaga baxdo, kana maqnaato mudo labo sano ah, ayna ka tagto caruurteeda iyo reerkeeda kaleba.
Yaasmiin ayaa racfaan ka qaadatay go´aanka UDI-da. Maxkamada hoose ee Oslo ayaa dowlada u xukuntay kiiska kala dhaxeeyay Yaasmiin. Balse maxkamada heerka labaad ee racfaanka ayaa Yaasmiin u xukuntay kiiska, iyaga oo cuskuday qodob ku saabsan xaq lahaanshaha ilmaheeda ay u xaq u leeyihiin la joogista hooyadooda. Aysana u fiicneyn inay hooyadood kala maqnaadaan labo sano.
Dowlada ayaan is dhiibin oo kiiska Yaasmiin kala dhaxeeyay toos racfaan ugu diray maxkamada sare. Maxkamada sare ayaa ayadna aqbashay inay dhageysato dacwada racfaanka ah ee ka dhaxeysay Yaasmiin iyo UDI-da.
Maxkamada sare ayaa dhamaadka isbuucii hore kiiska u xukuntay UDI-da, waxeyna sheegeen in mudada labada sano ay aad u gaabantahay, marka loo fiiriyo kiiska been sheegista ah ee Yaasmiin lagu heysto.
Yaasmiin ayaa hada sheegtay inay kiiskeed usii gudbineyso maxkamada xuquuqul insaanka Yurub.
Xigasho/kilde: Firebarnsmor sendes ut av landet etter 19 år gammel løgn
Previous articleGuul: Hooyo soomaali ah oo barnevernka kiis kaga guuleysatay maxkamada xuquuqul insaanka Yurub.
Next articleJawaabta: Ma runbaa in masaajidka Towfiiq si rasmi ah looga gooyay taageeradii dhaqaale ee dowlada?